रास्पबेरी पाई बनाम NAS सर्भर: सबै कुरा तपाइँ जान्न आवश्यक छ नि: शुल्क हार्डवेयर
यदि तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ भने NAS सर्भर प्रयोग गर्नुहोस्, तब तपाइँ जान्नु पर्छ कि तपाइँ तपाइँको औंलाहरु मा धेरै विकल्पहरु छन्। केहि भण्डारण माध्यम संग एक रास्पबेरी पाई को उपयोग बाट, यो एसडी कार्ड आफै वा एक बाह्य यूएसबी मेमोरी हो, एक नेटवर्क भण्डारण सेवा को रूप मा सेवा को लागी कन्फिगर, एक प्रदायक बाट एक क्लाउड भण्डारण सेवा को उपयोग गर्न को लागी, जस्तै Webempresa बाट लोचदार होस्टिंग, हार्डवेयर को माध्यम बाट NAS समाधान।
जस्तै सर्भरिड वेब, NAS सर्भर तिनीहरू सबैभन्दा उपयोगी हुन सक्छन् आजकल। या त डाटा भण्डारण गर्न को लागी कि तपाइँ कुनै पनी समय कहीं बाट पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकअप वा ब्याकअप प्रतिलिपि को लागी यो प्रयोग गर्न को लागी, जस्तै तपाइँको आफ्नै मल्टीमीडिया भण्डारण, र धेरै धेरै। बहुमुखी प्रतिभा अधिकतम छ, तर तपाइँ अवस्थित समाधान को बारे मा अधिक जान्न को लागी ताकि तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ...
1 एक सर्भर के हो?
1.1 कसरी सर्भर परिचालन गर्ने
1.2 सर्भरका प्रकारहरू
2 NAS सर्भर: सबै कुरा तपाइँ जान्न आवश्यक छ
2.1 म NAS संग के गर्न सक्छु?
2.2 कसरी उत्तम NAS सर्भर छनौट गर्ने?
3 रास्पबेरी पाई: निर्माताहरु को लागी स्विस सेना चाकू
3.1 रास्पबेरी पाई बनाम समर्पित NAS सर्भर को लाभ र हानि
एक सर्भर के हो?
यो जान्नु महत्वपूर्ण छ सर्भर के हो तेसैले तपाइँलाई थाहा छ कि ती सबै ठूला डाटा केन्द्रहरुमा छैनन्, तर तपाइँ यसलाई तपाइँको पीसी मा, तपाइँको रास्पबेरी पाई मा, र एक मोबाइल उपकरण मा पनि लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
कम्प्युटि In मा, एक सर्वर भन्दा बढी केहि छैन कम्प्युटरयसको आकार र शक्ति को बावजूद। यो कम्प्यूटर कुनै पनी उपकरण को आवश्यक भागहरु, साथ साथै एक अपरेटि system्ग सिस्टम र सफ्टवेयर हो कि एक सेवा (यसैले यसको नाम) प्रदान गर्न को लागी काम गर्दछ। उदाहरण को लागी, तपाइँ नेटवर्क भण्डारण, वेब होस्ट पृष्ठहरु, प्रमाणीकरण सर्वर, आदि को लागी NAS सर्वर समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ।
जुनसुकै सेवा सर्भर द्वारा प्रदान गरीएको हो, त्यहाँ अन्य उपकरणहरु छन् कि उनीहरु लाई सेवा बाट लाभ उठाउन को लागी यो जडान हुनेछ (सर्भर ग्राहक मोडेल)। यी अन्य उपकरणहरु ग्राहकहरु को रूप मा जानिन्छ र एक स्मार्टफोन, एक स्मार्ट टिभी, एक पीसी, आदि बाट हुन सक्छ।
कसरी सर्भर परिचालन गर्ने
ग्राहक-सर्भर मोडेल एक साधारण अवधारणा हो, जसमा एक सर्वर सधैं एक ग्राहक वा ग्राहकहरु को लागी एक अनुरोध गर्न को लागी प्रतीक्षा गरिनेछ। तर सर्भरले भने विभिन्न तरिकामा लागू गर्न सकिन्छ:
साझेदारी गरिएको: सामान्यतया होस्टिंग, वा वेब होस्टिंग, कि साझा गरीन्छ। त्यो हो, जहाँ धेरै वेबसाइटहरु होस्ट गरीन्छन् र त्यो सामान्यतया बिभिन्न मालिकहरुको स्वामित्वमा हुन्छ। त्यो हो, सर्वर हार्डवेयर (RAM, CPU, भण्डारण, र ब्यान्डविड्थ) साझा गरीएको छ।
फाइदाहरू: तिनीहरू सामान्यतया सस्ता हुन्छन् जब अरु संग साझा गरिन्छ। तपाइँ उच्च प्राविधिक ज्ञान को आवश्यकता छैन, यो सजीलो संग शुरू गर्न को लागी हो।
हानि: यो बहुमुखी र केहि अनुप्रयोगहरु को लागी नियन्त्रण को कमी को लागी याद गर्न सकिदैन। साझा गरिँदै, लाभहरु सबै भन्दा राम्रो नहुन सक्छ।
केको लागि? उनीहरु स्टार्ट-अप ब्लगहरु वा प्रति महिना ३०,००० भन्दा कम भ्रमण संग वेबसाइटहरु को लागी महान हुन सक्छ। साना साना ब्यापारिक पोर्टलहरुको लागी पनि।
वीपीएस (वर्चुअल प्राइभ सर्भर): तिनीहरू अधिक र अधिक लोकप्रिय हुँदैछन्। मूलतः यो विभिन्न भर्चुअल सर्भर मा एक "टुक्रा" कम्प्यूटर हो। त्यो हो, एक भौतिक मेसिन जसका संसाधनहरु धेरै भर्चुअल मिसिनहरु को बीच वितरित गरीन्छ। यसले उनीहरुलाई साझा र समर्पित बीच छोड्छ। त्यो हो, प्रत्येक प्रयोगकर्ता आफैं को लागी एक अपरेटि system्ग सिस्टम, र संसाधनहरु (vCPU, vRAM, भण्डारण, सञ्जाल) हुन सक्छ कि उनीहरु कसै संग साझा गर्न को लागी, VPS प्रबन्ध गर्न को लागी सक्षम भए जस्तै यो एक समर्पित एक हो।
फाइदाहरू: स्थिरता र स्केलेबिलिटी प्रदान गर्नुहोस्। तपाइँ सर्वर (तपाइँको साजिश को लागी) मा रूट पहुँच हुनेछ। तपाइँ कुनै पनी सफ्टवेयर स्थापना वा स्थापना रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। लागत को मामला मा, ती समर्पित भन्दा सस्ता छन्।
हानि: व्यवस्थापन, प्याचिंग र सुरक्षा तपाइँको जिम्मेवारी हुनेछ। यदि समस्या पैदा हुन्छ, तपाइँले उनीहरुलाई आफैंलाई समाधान गर्नुपर्नेछ, त्यसैले तपाइँ साझा गर्नुभएको भन्दा ठूलो प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ। साझा एक भन्दा धेरै बहुमुखी हुन को बावजूद, यो समर्पित एक को तुलना मा केहि सीमाहरु को लागी जारी छ।
केको लागि? साना र मध्यम आकार को कम्पनीहरु को लागी महान छ कि आफ्नो वेबसाइट वा सेवाहरु होस्ट गर्न चाहन्छन्।
समर्पित: उनीहरु मा तपाइँ "कष्टप्रद छिमेकीहरु" बिना, वातावरण को नियन्त्रण हुनेछ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ तपाइँको लागी मेशिन पाउनुहुनेछ, यसलाई व्यवस्थित गर्न को लागी तपाइँ चाहानुहुन्छ र तपाइँलाई चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
फाइदाहरू: अत्यधिक अनुकूलन, पूर्ण पहुँच र सर्वर मा नियन्त्रण, तपाइँ को लागी सबै संसाधनहरु को उपलब्धता को ग्यारेन्टी, गोपनीयता र सुरक्षा, स्थिर र अनुमानित प्रदर्शन सुधार।
हानि: उनीहरु धेरै महँगो छन् र उनीहरुलाई प्रबन्ध गर्न को लागी प्राविधिक संसाधनहरुको आवश्यकता पर्दछ। उनीहरुलाई नियमित मर्मत आवश्यक छ।
केको लागि? वेब अनुप्रयोगहरु, ईकामर्स साइटहरु, र सेवाहरु को लागी उच्च यातायात हुनेछ को लागी आदर्श।
प्रोपियो: अघिल्ला सबै क्लाउड कम्पनी द्वारा प्रदान गरिएका सर्वरहरु थिए। जे होस्, तपाइँ पनि तपाइँको आफ्नै सर्वर हुन सक्छ। यो महान लाभ हुन सक्छ, जब देखि तपाइँ हार्डवेयर को मालिक, तपाइँको डाटा को गोपनीयता र सुरक्षा को अधिकतम हुनेछ। तपाइँको आफ्नै सर्वर को लागी, यो गर्न सकिन्छ, जस्तै मैले पहिले उल्लेख गरेको छु, कुनै पनी पीसी, मोबाइल उपकरण, र एक रास्पबेरी पाई को उपयोग गरेर। निस्सन्देह, यदि तपाइँ त्यो भन्दा बढी शक्तिशाली केहि चाहिन्छ, तपाइँ सर्भरहरु जस्तै HPE, Dell, Cisco, Lenovo, आदि जस्ता फर्महरु द्वारा प्रदान गरीएको हो, तपाइँको आफ्नै "डाटा केन्द्र" बनाउन को लागी, जुनसुकै आकार ...
फाइदाहरू: तपाइँ सर्वर को मालिक हुनेछ, त्यसैले तपाइँ पूर्ण नियन्त्रण हुनेछ। स्केलिंग वा हार्डवेयर कम्पोनेन्ट प्रतिस्थापन गर्दा पनि।
हानि: तपाइँ सबै असुविधाहरु कि उत्पन्न हुन सक्छ, मर्मत, रखरखाव, आदि को ख्याल राख्नु पर्छ। यसको अतिरिक्त, यो लागत मा वृद्धि छ, दुबै आवश्यक हार्डवेयर र इजाजतपत्र किन्न, साथै बिजुली को खपत कि मेशिन हुन सक्छ, र आईपीएस तिर्न यदि तपाइँ छिटो ब्रॉडब्यान्ड चाहिन्छ।
केको लागि? यो संगठनहरु, कम्पनीहरु, र सरकारहरु को लागी डाटा को पूर्ण नियन्त्रण को आवश्यकता हो, वा प्रयोगकर्ताहरु को लागी जो केहि धेरै विशिष्ट सेट अप गर्न चाहान्छन् र अरु को हात मा आफ्नो डाटा छोड्न को लागी उपयोगी हुन सक्छ।
हुन सक्छ यी भित्र भेरिएन्ट, विशेष गरी सेवाहरु र सुविधाहरु को लागी केहि वर्तमान प्रदायकहरु, जस्तै प्रबन्धित सेवाहरु को लागी ताकि तपाइँ केहि, सुरक्षा समाधान, सरल स्थापनाकर्ताहरु बिना अपरेटि systems सिस्टम वा सफ्टवेयर स्थापना गर्न को लागी चिन्ता लिनु पर्दैन, आदि।
अघिल्लो खण्डमा तपाइँ सर्भर लागू गर्ने तरिका जान्न सक्षम हुनुभएको छ, जे होस्, ती पनी सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ सेवा को प्रकार मा निर्भर गर्दछ उधारो:
वेब सर्भरहरू: सर्वर को यो प्रकार धेरै लोकप्रिय छ। यसको कार्य वेब पेजहरु होस्ट र व्यवस्थित गर्न को लागी हो कि ग्राहकहरु, वेब ब्राउजरहरु वा क्रॉलरहरु संग, HTTP / HTTPS जस्तै प्रोटोकलहरु को माध्यम बाट उनीहरु पहुँच गर्न सक्छन्।
फाइल सर्भरहरू: ती जो ग्राहक डाटा भण्डारण गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ ताकि उनीहरु अपलोड वा नेटवर्क को माध्यम बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यी सर्भरहरु भित्र त्यहाँ धेरै प्रकारहरु छन्, जस्तै NAS सर्वर, FTP / SFTP सर्वर, SMB, NFS, आदि।
ईमेल सर्भर: यी सेवाहरु प्रदान गर्दछ कि ईमेल प्रोटोकल लागू गर्न को लागी ताकि ग्राहकहरु लाई कुराकानी गर्न, ईमेल प्राप्त गर्न वा पठाउन सकिनेछ। यो सफ्टवेयर को माध्यम बाट SMTP, IMAP, वा POP को रूप मा प्रोटोकल लागू गर्न को लागी हासिल गरीन्छ।
डाटाबेस सर्भरयद्यपि उनीहरु फाइलहरु भित्र सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ, यो प्रकार एक पदानुक्रमित र एक डेटाबेस मा व्यवस्थित तरीका मा जानकारी को भण्डारण गर्दछ। केहि सफ्टवेयर एक डाटाबेस लागू गर्न को लागी PostgreSQL, MySQL, MariaDB, आदि छन्।
खेल सर्भर: एक सेवा विशेष गरी प्रदान गर्न को लागी ग्राहकहरु (गेमर) लाई अनलाइन मल्टिप्लेयर मोड मा खेल्न को लागी सक्षम हुन को लागी आवश्यक छ समर्पित छ।
प्रोक्सी सर्भर: सञ्जाल मा एक संचार इन्टरफेस को रूप मा कार्य गर्दछ। उनीहरु एक बिचौलिया को रूप मा कार्य गर्दछ र यातायात, नियन्त्रण ब्यान्डविड्थ, लोड साझेदारी, क्याचिंग, गुमनाम, आदि फिल्टर गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
DNS सर्भर: यसको उद्देश्य एक डोमेन नाम संकल्प सेवा प्रदान गर्न को लागी हो। त्यो हो, ताकि तपाइँ सर्वर को आईपी याद गर्न को लागी तपाइँ पहुँच गर्न चाहनुहुन्न, केहि थकाऊ र धेरै सहज छैन, तपाइँ मात्र होस्ट नाम (डोमेन र TLD) को उपयोग गर्नुपर्नेछ, जस्तै www.example, es , र सर्भर DNS पहुँच को अनुमति दिन को लागी त्यो डोमेन नाम संग सम्बन्धित आईपी को लागी यसको डाटाबेस खोजी हुनेछ।
प्रमाणीकरण सर्भर: उनीहरु केहि प्रणालीहरुमा पहुँच को लागी सेवाहरु प्रदान गर्न को लागी सेवा गर्छन्। तिनीहरू सामान्यतया ग्राहकहरु को प्रमाण पत्र संग एक डाटाबेस र मिलेर बनेको छ। यसको एउटा उदाहरण LDAP हो।
अरूलाईत्यहाँ अन्य छन्, यसको अतिरिक्त, धेरै होस्टिंग सेवाहरु यी मध्ये धेरै को एक संयोजन प्रदान गर्दछ। उदाहरण को लागी, त्यहाँ आवास छ कि तपाइँ डाटाबेस, ईमेल, आदि संग प्रदान गर्दछ।
NAS सर्भर: सबै कुरा तपाइँ जान्न आवश्यक छ
को NAS (नेटवर्क संलग्न भण्डारण) सर्भर तिनीहरू सञ्जाल संलग्न भण्डारण उपकरण हुन्। यस संग तपाइँ डेटा होस्ट गर्न को लागी एक साधन हुन सक्छ र यो तपाइँको निपटान मा कुनै पनी समय छ। यस प्रकारको सर्भर उपकरणहरु को एक भीड, जस्तै एक पीसी, एक मोबाइल उपकरण, एक रास्पबेरी पाई, एक क्लाउड भण्डारण सेवा को लागी भुक्तान, र यहाँ सम्म कि तपाइँको आफ्नै NAS (जुन म यस फोकस मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ) को रूप मा सफ्टवेयर को उपयोग गरी लागू गर्न सकिन्छ। )।
यी NAS सर्भरहरु को आफ्नो CPU, RAM, भण्डारण (SSD वा HDD), म / ओ प्रणाली, र तपाइँको आफ्नै अपरेटि system सिस्टम। यसको अतिरिक्त, बजार मा तपाइँ केहि घर प्रयोगकर्ताहरु मा ध्यान केन्द्रित पाउन सक्नुहुन्छ, र अन्य ब्यापार वातावरण को लागी अधिक क्षमता र प्रदर्शन संग।
El कार्य गर्दै यी सर्भर को बुझ्न को लागी सरल छ:
प्रणाली: NAS सर्भरहरु एक हार्डवेयर र एक अपरेटि system्ग सिस्टम छ कि ग्राहकहरु लाई पारदर्शी रूपमा सबै प्रकार्यहरु प्रदर्शन गर्दछ। त्यो हो, जब ग्राहक अपलोड, मेटाउन, वा डाटा डाउनलोड गर्ने निर्णय गर्दछ, यो ग्राहक को लागी एक सरल इन्टरफेस को पेशकश, यस को लागी सबै आवश्यक कदमहरुको ख्याल राख्नेछ।
भण्डारण: तपाइँ तिनीहरूलाई फरक स्लट संग पाउन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक स्लट मा तपाइँ एक भण्डारण माध्यम सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ यसको क्षमता विस्तार गर्न को लागी, यो एक HDD वा एक SSD हो। मिल्दो हार्ड ड्राइभहरु बिल्कुल उस्तै समान हुन् जुन तपाइँ तपाइँको परम्परागत पीसी मा प्रयोग गर्नुहुन्छ। जे होस्, त्यहाँ NAS को लागी विशिष्ट श्रृंखलाहरु छन्, जस्तै पश्चिमी डिजिटल रातो श्रृंखला, वा Seagate IronWolf। यदि तपाइँ एक व्यापार दायरा चाहानुहुन्छ, तपाइँसँग WD Ultrastar र Seagate EXOS पनि छ।
लाल: निस्सन्देह, ग्राहकहरु बाट सुलभ हुन को लागी, यो नेटवर्क संग जोडिएको हुनु पर्छ। या त ईथरनेट केबल वा वायरलेस टेक्नोलोजी द्वारा।
म NAS संग के गर्न सक्छु?
NAS सर्भर भएकोले तपाइँलाई तपाइँको निजी भण्डारण "क्लाउड" गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, जुन महान लाभहरु हुन सक्छ। को बीचमा विशेष अनुप्रयोगहरू तिनीहरू छन्:
एक नेटवर्क भण्डारण माध्यम को रूप मा: तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँलाई चाहिने सबै चीजहरु को स्टोर गर्न को लागी, उदाहरण को लागी, तपाइँको फोटोहरु तपाइँको मोबाइल उपकरण बाट बचाउनुहोस्, यसलाई मल्टीमीडिया फाइलहरु को एक अनलाइन ग्यालरी को रूप मा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाइँको आफ्नै Netflix जस्तै स्ट्रीमिंग सेवा तपाइँको मनपर्ने फिल्महरु र श्रृंखला होस्टिंग (Plex यो व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ , Kodi,…), आदि।
बेकअप: तपाइँ एक सरल तरीका मा तपाइँको NAS मा तपाइँको प्रणाली को ब्याकअप प्रतिलिपि बनाउन को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। यस तरीकाले तपाइँ सधैं तपाइँको औंलाहरु मा एक जगेडा हुनेछ र तपाइँ ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ कि तपाइँको डाटा एक ज्ञात सर्वर मा छ।
शेयर: तपाइँ यसलाई तपाइँको साथीहरु र परिवार संग फाइलहरु को सबै प्रकार को साझा गर्न को लागी, वा जो कोहि संग तपाइँ चाहानुहुन्छ। केवल अपलोड के तपाइँ साझा गर्न चाहानुहुन्छ र तपाइँ अन्य ग्राहकहरु लाई पहुँच दिन सक्नुहुन्छ ताकि उनीहरु यसलाई पहुँच वा डाउनलोड गर्न सक्छन्।
सेवा प्रदायक: तपाइँ यसलाई एक वेब होस्ट को रूप मा त्यहाँ तपाइँको साइट लाई बचाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, ध्यान राख्नुहोस् कि NAS सर्भर तपाइँको नेटवर्क ब्यान्डविड्थ मा सीमित हुनेछ। त्यो हो, यदि तपाइँ एक छिटो लाइन छैन, र अरु NAS को उपयोग गरीरहेका छन्, तपाइँ उल्लेखनीय प्रदर्शन ड्रप देख्नुहुनेछ। फाइबर प्रकाशिकी संग यो धेरै सुधारिएको छ।
अरूलाई: त्यहाँ NAS सर्भरहरु पनि छन् कि एक FTP सर्वर को रूप मा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, एक डाटाबेस होस्ट गर्न को लागी, र केहि वीपीएन को लागी कार्यहरु पनि सामेल छन्।
कसरी उत्तम NAS सर्भर छनौट गर्ने?
जब तपाइँको आफ्नै NAS सर्भर किन्नु हुन्छ तपाइँ निश्चित रूपमा उपस्थित हुनु पर्छ प्राविधिक विशेषताहरु यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि तपाइँ एक राम्रो खरीद गरीएको छ:
हार्डवेयर- यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँसँग राम्रो प्रदर्शन र राम्रा राम्रा मात्रा को लागी एक चपलता को लागी एक सीपीयू छ। यो कसरी यो सेवा सहज छ मा निर्भर गर्दछ, यद्यपि सबै कुरा तपाइँको विशिष्ट आवश्यकताहरु मा थोरै निर्भर हुनेछ।
बे / भण्डारण: संख्या र खाडी को प्रकार (२.५ ″, ३.५ ″, ...) ध्यान दिनुहोस् कि इन्टरफेस पहिले नै छ (SATA, M.2.5, ...)। केहि NAS सर्भरहरु क्षमता मापन गर्न को लागी हार्ड ड्राइव को अधिक संख्या मा स्थापित समर्थन (3.5TB, 2TB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB, ...)। त्यहाँ डाटा अनावश्यकता को लागी RAID प्रणाली को विन्यस्त गर्ने संभावना संग ती पनि छन्। र याद गर्नुहोस् कि यो महत्वपूर्ण छ NAS- विशिष्ट हार्ड ड्राइभहरु को लागी, जो उच्च भार र अपटाइम को समर्थन को लागी अनुकूलित गरीएको छ:
पश्चिमी डिजिटल रातो प्लस 8TB 3.5
पश्चिमी डिजिटल रातो एसएसडी २ टीबी २.५
पश्चिमी डिजिटल रातो प्रो 4TB 3.5
नेटवर्क जडान: अर्को कारक खाता मा लिन को लागी ग्राहकहरु संग तपाइँको सर्वर लाई सबै भन्दा राम्रो तरीका मा लिंक गर्न को लागी।
अपरेटि system सिस्टम र एप्स: प्रत्येक निर्माता सामान्यतया आफ्नो प्रणाली, र स्वामित्व अनुप्रयोग र कार्यहरु को एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ। सामान्यतया, जसरी तपाइँ मेनूहरु को माध्यम बाट सार्नुहुन्छ र विकल्पहरु तपाइँ तपाइँको औंलाहरु मा छन् यो मा निर्भर गर्दछ। प्रदायकको आधारमा भिन्न हुन्छ।
सर्वश्रेष्ठ ब्रान्ड- NAS सर्भर को केहि अत्यधिक सिफारिश ब्रान्ड Synology, QNAP, पश्चिमी डिजिटल, र Netgear छन्। केहि खरीद सिफारिशहरु छन्:
पश्चिमी डिजिटल मेरो बादल घर ईथरनेट जडान र 4TB सम्म (घर को लागी)
Synology DS720 +2बे (साना व्यवसाय वा अधिक माग प्रयोगकर्ताहरु को लागी)
QNAP4बे र 8 टीबी सम्म (पेशेवरहरु को लागी)
रास्पबेरी पाई: निर्माताहरु को लागी स्विस सेना चाकू
NAS सर्भर को लागी एक सस्तो समाधान यदि तपाइँ महान आवश्यकताहरु छैन भने तपाइँको SBC को उपयोग गर्न को लागी ती मध्ये एक लाई लागू गर्न को लागी हो। रास्पबेरी पाई तपाइँलाई अनुमति दिन्छ घरमा तपाइँको आफ्नै सस्तो NAS। तपाइँ मात्र चाहिन्छ:
एक रास्पबेरी पाई.
भण्डारण माध्यम (तपाइँ मेमोरी कार्ड वा एक USB भण्डारण माध्यम तपाइँको Pi मा जोडिएको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक बाह्य USB हार्ड ड्राइभ वा एक पेनड्राइभ हुन सक्छ ...
सेवा लागू गर्न सफ्टवेयर। तपाइँ धेरै परियोजनाहरु, पनि खुला स्रोत बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, ownCloud को रूपमा, NextCloud, आदि
रास्पबेरी पाई बनाम समर्पित NAS सर्भर को लाभ र हानि
यदि तपाइँ NAS सर्भर को फाइदाहरु को आनन्द लिने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाइँ मूल्यांकन गर्नु पर्छ फाइदा र बेफाइदाहरू कि एक रास्पबेरी पाई को माध्यम बाट यसको कार्यान्वयन हुन सक्छ:
तैनाती प्रक्रिया को समयमा सिक्दै
सेटअप र मर्मत संग कठिनाई
सधैं यो नेटवर्क संग जोडिएको छ र बिजुली आपूर्ति (खपत) को आवश्यकता छ
यो एक समर्पित NAS उपकरण छैन, त्यहाँ समस्याहरु हुन सक्छ यदि तपाइँ अन्य परियोजनाहरु को लागी SBC को उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ
En निष्कर्षयदि तपाइँ एक धेरै आधारभूत र सस्तो अस्थायी NAS सेवा को जरूरत छ, रास्पबेरी पाई तपाइँको सबैभन्दा राम्रो सहयोगी हुनेछ ताकि तपाइँ धेरै पैसा लगानी गर्न को लागी छैन। अर्कोतर्फ, अधिक भण्डारण क्षमता, स्थिरता, मापनयोग्यता, र प्रदर्शन संग सेवाहरु को लागी, तब यो तपाइँको आफ्नै NAS सर्वर किन्ने वा एक क्लाउड भण्डारण सेवा भाडामा लिने सबै भन्दा राम्रो छ ...
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » रास्पबेरी Pi » रास्पबेरी पाई बनाम NAS सर्भर: सबै कुरा तपाइँ जान्न आवश्यक छ
1n4148: सबै सामान्य उद्देश्य डायोड को बारे मा